Ikhampasi Yezintengo Ephelele China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ikhampasi Yezintengo Ephelele - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ikhampasi Yezintengo Ephelele)
Hobbycarbon 1000X2000X2.0mm 3K twill matte full carbon fiber sheet I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende...
I-Hobbycarbon 400X500X2.0mm i-3K twill matte i-carbon fiber sheet ephelele I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza...
I-Hobbycarbon 1000X600X4.0mm 3K ngokugcwele i-matte carbon fiber plate I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza...
I-Hobbycarbon 1000X1500X6.0mm 3K i-carbon fiber sheet ephelele I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza amakhasimende...
Idizayini entsha 30X30X500mm i-carbon fiber octagonal tube ephelele
Idizayini entsha 30X30X500mm i-carbon fiber octagonal tube ephelele 1.Introduction Lawa Khabhoni we-3K Carbon Fubes Carbon enziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala namasayizi ahlukahlukene (imibala evamile emnyama); Izinhlobo ezenziwe ngokwezifiso zamukelwa,...
Ikhampasi Yezintengo Ephelele Ikhampasi Yezingxenye Zomjaho Ikhampasi Ye-Tube End Iphampasi Yepayipi Ikhampasi ye-Aluminium Ehambayo Ibhodi Yezindwangu Eziphezulu Zekhabhoni Ikhampasi YeCarbon Tube Ye-Fibre Pipe Ikhampasi yeCarbon Tube